Ukurekhodwa kwe-4K ProRes kufumaneka kuphela kwi-13GB ye-iPhone 256 | IPhone iindaba
Ukurekhodwa kwe-4K ProRes kufumaneka kuphela kwi-13GB ye-iPhone 256
UIgnacio Sala | 15/09/2021 15:00 | iOS 15, iPhone 13
Enye yeenoveli eziphambili ezivela kwisandla esitsha se-iPhone 13 Pro uluhlu IproRes yevidiyo yoxinzelelo lwefomathi yenkxaso, into apho iApple ichithe ixesha elininzi kunikezelo lwesizukulwana esitsha se-iPhone 13 Pro kodwa inomda.
Njengoko sinokubona kwiwebhusayithi ye-Apple, ukubakho kokurekhoda kwifomathi yeProRes kumgangatho we-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana Inikwe umda kwiimodeli ezine-256GB yokugcina kunye, ishiya imodeli eyi-128 GB, imodeli enokuthi isebenzise kuphela le fomathi kwisisombululo se-1080p.
iapile ayisichazi isizathu salo mda, Kodwa kucingelwa ukuba inkampani ithathele ingqalelo ukuba i-128 GB yokugcina ayonelanga ngokwaneleyo ukugcina iifayile ezinzima ezenziweyo.
Nangona kunjalo, ukuba anganikezela ngokunokwenzeka kwaye ingaba umsebenzisi ukhetha ukuyisebenzisa okanye hayi, kuba kwiiprojekthi ezincinci akuyi kuba yimfuneko ukuba nendawo yokugcina kangaka. Okucacileyo kukuba, kulandela ifilosofi ka-Apple, ukuba ufuna ukusebenzisa ukurekhodwa kwe-4K kwii-fps ezingama-30, kuya kufuneka uhlawule.
La Umahluko wamaxabiso phakathi kwenguqulo yokugcina eyi-128 GB kunye nohlobo lwe-256 GB ngu-120 eurosIxabiso, ukuba uzimisele ukuhlawula i-1.159 euro ye-iPhone 13 Pro 128 GB okanye i-1.259 ye-iPhone Pro Max enomthamo wokugcina ofanayo, ayizukuba ngumzamo omkhulu wezoqoqosho.
Ifomathi yeProRes ibonelela nge- ukuthembeka kombala okuphezulu kuthatha indawo encinci kwisixhobo, iyenza ilungele ukurekhoda iiprojekthi zobungcali, okanye nokuba ziingcali. Oku kusetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yokusebenza emva kwemveliso kwaye inokukhutshelwa ngaphandle ngokulula kubahleli abanjengeFinal Cut Pro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Ukurekhodwa kwe-4K ProRes kufumaneka kuphela kwi-13GB ye-iPhone 256
Ndinombuzo, kwi-4K ungasebenzisa kuphela i-ProRes kwi-30fps kodwa inokusetyenziswa kwi-1080p kwi-60fps?
Kumfanekiso endiwuthathe kwiwebhusayithi ye-Apple kwaye ndibandakanyiwe kwinqaku, ibonisa ukuba inokurekhoda kwifomathi yeProRes kwi-4K kunye ne-30 fps, isisombululo esincitshisiwe saya kwi-1080 kunye ne-30 fps kuhlobo lwe-128 GB.
Okwangoku kubonakala ngathi le fomathi inqunyelwe kwi-30 fps, lusizi.
Kuya kufuneka silinde iimodeli ezilandelayo ze-iPhone ukuze sisebenzise le fomathi kwinqanaba eliphezulu lesakhelo.
I-iPhone 13 entsha inesisindo esingaphezulu kwaye somelele kune-iPhone 12
I-Apple Watch Series 7 inyusa iprosesa efanayo ne-Series 6